Factory yeMbeu yeLabhoritari - China Laboratory Seed Equipment Manufacturers and Suppliers
Rotary Speed: 2800r / min
5XQS-L murabhoritari destoner yembeu dzemiriwo gorosi sesame chia
5XQS-L Destone inonyanya kushandiswa mukuparadzanisa mbeu diki (mhodzi dzemuriwo, mhodzi dzeforoji nembeu dzemaruva) nematombo. Iko kushandiswa kweakasiyana chaiwo giravhiti uye kumiswa kumhanya kwezviyo zvekudya nematombo. Gamuchira nzira yeMhepo uye mekiniki kufamba, kubvisa jecha uye kumwe kusvibiswa kunorema. Inonyanya kushandiswa mumhando dzose dzembeu pakubvisa matombo neIvhu zvidimbu, kuwana mhodzi dzakasimba.
5XWY indented silinda kureba giredhi zviyo zvekuparadzanisa muchina nekureba
Murabhoritari inded silinda inoshandiswa kupatsanura mbeu nezvimwe zvinhu nemusiyano wehurefu.